Soo dejisan Minecraft 1.16.5 – Windows – Vessoft
Minecraft – ciyaar caan baadan dhismaha shirkadda Mojang. Kulankaan ayaa kuu ogolaanayaa inaad si loo xakameeyo dabeecad in burburin kara ama qarka blocks, dhiso dhismayaasha cajiib ah, keligaa ama si wadajir ah loo abuuro farshaxanimada ciyaartoy kale oo ku server kala duwan ee afar hababka ciyaarta. Minecraft waxaa ku jira waxyaabaha badan oo kala duwan, blocks, xayawaanka, iyo adduunka u weyn oo loo dhisay ee ku sifayn ciideed oo la xubno ka mid ah badbaadada adduunka duurjoogta ah ee ciyaarta Minecraft ah. Kulankaan ayaa waxaa si joogto ah guuxayay oo la xariirta si ay u bixiyaan ciyaarta ka raaxo badan.
Adduunka ciyaar badan
Kartida in la abuuro farshaxanka
Hagaaji si loo hagaajiyo ciyaarta